Xasuus Saado Cali Warsame
Wafdi uu horkacaayo madaxweyne Xasan Sheekh oo diyaarad Helicopter ah keentay magaalada Muqdisho.
on September 04 2013 Wafdi uu horkacaayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii shalay safar lugta ah ku tagay magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Wafdiga madaxweynaha oo ka koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi si aad ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha AMISOM.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa diyaarad Helicopter ah waxay kasoo qaaday maagaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose, iyadoona ka dib ay daqiiqado ka hor soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii ugu horeeysay tan iyo markii xilkaaas loo magacaabay ku hoyday magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose, isagoona inta uu ku sugnaa magaaladaasi uu la kulmay odayaal dhaqameed iyo mas'uuliyiinta maamulka gobalkaas.